यी मनकारी नेपाली युवा : जसले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नै घर नि:शुल्क ‘क्वारेन्टाइन’ बनाउन दिने ! – Khabarhouse
यी मनकारी नेपाली युवा : जसले कोरोना संक्रमित राख्न आफ्नै घर नि:शुल्क ‘क्वारेन्टाइन’ बनाउन दिने !
Khabar house | ५ चैत्र २०७६, बुधबार ०६:२६ | Comments
काठमाडौं । कोेरोना भाइरसका कारण आयात, निर्यातमा समस्या भएर ग्यास अभाव हुन्छ भन्ने खबर मात्रै फैलिँदा पनि काठमाडौंका ग्यास डिपोहरुमा लाइन लाग्न थालेको छ । एक जनाले ५ वटासम्म ग्यास भराइ रहेका छन् । पहुँच नहुने, समयमा डिपोमा नपुग्नेहरु त जिल्लै । यता नुन, चिनी लगायत खाद्य वस्तुको अवस्था पनि उस्तै छ ।
एउटै परिवारले १० पोकासम्म नुन भण्डारन गर्दा बाँकी ९ परिवारको खाना अलिनो रहन सक्छ भनेर सोचिँइदैन। हाम्रो उपभोक्ता चेतले अरुलाई जेसुकै होस् तर, आफू चाहिँ ‘सेफसाइड’मा रहनुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। त्यसैले, अक्सर नेपाली बजारमा ‘अभाव’ आइ पुग्नु अघि नै अभाव भइसक्छ । मानिसको चेतनाको अभावले गर्दा ।
एकातिर उपभोक्ता ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखशयल वा मोज म गरुँ, म बाँचु, मै नाँचु अरु सब मरुन् दुर्बलहरु’ भन्ने होडबाजीमा लागिरहेका वेला अर्कोतिर व्यापारीको पनि छुट्टै मेला लागेको छ । नाफाको मेला । देशको स’ङ्कटलाई पैसा लुट्ने अवसरका रुपमा लिने व्यापारीहरुको प्रवृत्ति बुझ्न नाकाबन्दी र भूकम्पका घटना नै काफी छन् ।
बजारमा ‘स्वार्थ’को खेल चलिरहेका वेला एकजना यस्तो व्यक्ति छन् जसले आफ्नो घर कोरोना भाइरस संक्रमित वा संक्रमणको आशंकामा रहेकाहरुलाई राख्नलाई निशुल्क प्रदान गर्ने भएका छन्। हो, लालचन्द्र गौतमले काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित आफ्नो ३ तले घर ‘क्वारेन्टाइन’का रुपमा प्रयोग गर्नलाई विना शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् ।
उनले सरकार तथा गैरनाफा मूलक संस्थाले आफ्नो घरलाई अस्थायी रुपमा अस्पतालका रुपमा परिणत गर्न चाहेको अवस्थामा पनि विना पैसा घर उपलब्ध गराउने समेत बताएका छन् । आफ्नो फेसबुक वालमार्फत् उनले यो जानकारी दिएका छन् । आफ्नो घरको तस्वीर पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘यो हाम्रो कुलेश्वरमा भएको घर हो । हाल खाली छ र मर्मतसम्भार भइरहेको छ किनकी हामीले यसलाई बेच्न लागेका छौं ।
हामीले यसलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न प्रयोग गर्ने निर्णय लियौं। यदि कोही नेपाली वा विदेशीले यसलाई आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाइलाई यो घर निशुल्क उपलब्ध गराउन पाए अत्यन्तै खुशी हुनेछौं। घर ३ तलाको छ जसका २ वटा बेडरुम पूर्णरुपमा तयार छन् भने २ भान्सा कोठा, ३ वटा खाली बेडरुम सँगैै २ वटा बैठक कोठा पनि छन् ।
मलाई थाहा छ नेपाल सरकारको रातारात नयाँ अस्पताल बनाउने अवस्था छैन त्यसैले यदि नेपाल सरकार वा गैरनाफा मूलक संस्थाले घरलाई अस्थायी अस्पतालको रुपमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ भने म यो घर विना पैसा दिन तयार छु । त्यस दौरान लाग्ने बिजुली, पानी लगायतको खर्च पनि म आफैले उठाउनेछु । नेपाल कोरोना भाइरस मुक्त भएपछि मात्रै यो घर किन्न इच्छुकलाई बेच्नेछु ।
सम्पर्क गर्न चाहनेले फेसबुक इनबक्समा मेसेज गर्नुहोला ।’ उनको यो पोस्टले फेसबुकमा खुब चर्चा कमाएको छ । पोस्टमा हजारौं लाइक छन् र यो हजारौं पटक शेयर भएको छ । उनलाई साथीभाइ तथा चिनजानमा रहेकाले मात्र नभएर अपरिचित व्यक्तिलेसमेत धन्यवाद दिइरहेका छन् । लाल चन्द्र गौतमको पाइला पछ्याउँदै अर्का व्यक्तिले समेत आफ्नो घरलाई ‘क्वारेन्टाइन’को रुपमा प्रयोग गर्न निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय लिएका छन् ।
गोयल ग्रुप नेपालका कार्यकारी निर्देशक चिराग गोयलले सिफल स्थित आफ्नो खाली घर कोरोना विरुद्ध लड्न विना पैसा प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘एक विदेशीले नेपालमा ‘आइसोलेसन’मा बस्न चाहेको तर, होटेलमा बस्नलाई पैसा नभएको र आइसोलेसनमा बस्नलाई कुनै ठाउँ नपाएको पोस्ट देखेपछि हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन अवधि अर्थात् १४ दिनसम्म निशुल्क हाम्रो घरमा बस्न दिने निर्णय गरेका छौं,’ उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् ।
भलै नेपालमा कोरोना संक्रमणको कुनै घटना पुष्टि भएको छैन तर, विश्वका १ सय ६० वटा भन्दा बढी देशको सीमा नाघि सकेको यो महामारी नेपाल आउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि लाल चन्द्र र चिरागले फेसबुकमा लेखेको कुरा साँचो हो भने उनीहरुले चालेको कदम वास्तवमै प्रशंसनीय छ । र, यस कार्यमार्फत् उनीहरुले ठूलो परोपकार गर्नेछन् ।